अपडेट ः अज्ञात समुहको गोली र खुकुरी प्रहारबाट घाइते घोडाघोडीका नगर प्रमुख चौधरीको उपचार जारी ।।
अज्ञात समुहको गोली र खुकुरी प्रहारबाट घाइते कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका नगर प्रमुख ममता प्रसाद चौधरीको उपचार जारी रहेको छ । गोली र खुकुरी प्रहारबाट चौधरीको टाउको, कम्मर र खुट्टामा गम्भीर चोट लागेको छ । सोमबार राति आठ बजेपछि सुख्खड बजार मै रहेको नगर प्रमुख चौधरीको घरमा उहाँमाथि गोली र खुकुरी प्रहार भएको थियो ।
चौधरीलाई घोडाघोडी अस्पतालमा सामान्य चेकजाँच पछि थप उपचारका लागि सोमबार राति नै कोहलपुर रिफर गरिएको छ । उहाँको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा आइसियु कक्षमा राखी उपचार भइरहेको घटनापछि कोहलपुर मेडिकल कलेजमा पुग्नुभएका कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष अर्जुन ढकालले जानकारी दिनुभयो । उहाँको कम्मरमा गोली प्रहार भएको छ भने टाउको र हातमा खुकुरी प्रहार गरिएको छ ।
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका नगर प्रमुख ममता प्रसाद चौधरी माथी भएको यो घटना दुखद र निन्दनीय भएको बेलौरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख पोतिलाल चौधरीले बताउनु भयो । समाजमा घट्ने गरेका यस्ता अमानवीय घटनाहरुका कारण जनप्रतिनिधिलाई काम गर्ने वातावरण नमिल्ने भन्दै अपराधीको खोजी गरी कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । घटना घटेको थाहा पाउने वित्तिकै सोमबार राति नै बेलौरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख पोतिलाल चौधरी, उपप्रमुख चित्रकुमारी चौधरी, वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष अर्जुन ढकाल, कम्प्युटर अपरेटर अशोक पाण्डेय लगायतको टिम बेलौरीबाट कोहलपुर गएको हो ।